संसद पुनस्थापना हुँदा ओलीले बालुवाटारमा सगुन र प्रचण्ड–माधवले चितवनमा लड्डु खाए ! – Kendra Khabar
संसद पुनस्थापना हुँदा ओलीले बालुवाटारमा सगुन र प्रचण्ड–माधवले चितवनमा लड्डु खाए !
२०७७, ११ फाल्गुन मंगलवार २०:३६
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा आफ्ना परिवारले दिएको सगुन खाइरहेका थिए । सर्वोच्चले फैसला दिएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघुन खुवाइएको होइन । उनको जन्मदिनको खुसियालीमा परिवारका सदस्यले सगुन खुवाएका हुन् ।
परिवारका सदस्यले उनलाई सगुन अन्डा, सगुन माछा र सगुन द्यौ खुवाएर उनको ७० औं जन्मदिन मनाएका प्रधानमन्त्री निवास स्रोतले बताएको छ । जन्मदिन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीका बुवा मोहनप्रसाद ओली, पत्नी राधिका शाक्यसहित परिवारका थोरै सदस्यहरू सहभागी थिए।
प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् । संसद भंग गर्ने कदम गैरसंबैधानिक र गैरराजनीतिक भन्दै यसलाई सच्याउन भन्दै नेकपाका प्रचण्ड– माधव समुह सडक संघर्षमा थियो।
यही क्रममा बुधबार हुने सभालाई सम्बोधन गर्न दुबै अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल चितवनमा छन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला भएपछि चितवनमा रहेका दुबै अध्यक्षले एक अर्कालाई लड्डु खुवाएर खुशी साटासाट गरेका छन् । प्रचण्ड नेपाल समुहका नेता कार्यकर्ताले संसद पुनस्थापना हुँदा देशभर नै खुशीयाली मनाई रहेका छन् ।